जसपा विवादबारे के आयो निर्वाचन आयोगको फैसला ? — Imandarmedia.com
जसपा विवादबारे के आयो निर्वाचन आयोगको फैसला ?
काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टीको विवादसम्बन्धी मुद्दा निर्वाचन आयोगको इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको इजलासले दलको विवादमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कागजपत्र झिकाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै आयोगको इजलासले आगामी साउन ६ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरेको छ।
‘६ गतेदेखि हामीले बहसका लागि दैनिक २ घन्टाको समय छुट्टयाएका छौं’, एक आयुक्तले भने, ‘दुबै पक्षका तीन/तीन जना वकिललाई समय दिनेछौं।’ आयोगले ६ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरेर निर्णयमा पुग्ने जनाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्ष दुबैले आधिकारिकता दाबी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा उनीहरूले विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरिसकेका छन्।
यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्षले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले ठाकुरलाई पत्र लेखेर विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै बसेको ठाकुर पक्षका सांसदहरुको बैठकले देउवालाई मत दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागेका छन् । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो वैठकमा उनले आफूलाई विश्वासको मत दिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड १९ को नियन्त्रण सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । ‘दिनहुँ संक्रमण बढिरहेको छ । दैनिक रुपले मानिसहरु मरिरहेका छन् ।
शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु,’ संसद्मा विश्वासको मत माग्दै उनले भने,‘कोभिड १९ को रोकथामका लागि अहोरात्र खट्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । कोभिड १९ को प्रकोपबाट जोगाउनु यो पहिलो प्राथमिकता प्राथमिकता हा । नियन्त्रणका लागि सबै उपायहरु अबलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । कोभिड १९ लोकतन्त्रको चुनौती रहेको उनले बताए । ‘गरिबी र बेरोजगारी जस्ता चुनौती पनि छन्,’ उनले भने,‘ हामी सबैले मिलेर राम्रो काम गर्नु पर्दछ भन्न चाहन्छु । राजनीति दल एक अर्काका शत्रु होइनौँ ।’ यस्तो छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको मन्तव्यको पूर्णपाठ :
पटक–पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण विगत केही समय देशमा राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चितताको स्थिति रह्यो । नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त हुनु भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री माननीय के.पी. शर्मा ओलीजीले धारा ७६ (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नु भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया प्रारम्भ भयो ।
संसदीय लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि देशमा लामो त्याग तपस्या र बलीदानपूर्ण संघर्ष भएको हो । संसदलाई अधिकार सम्पन्न, जिवन्त र क्रियाशिल बनाउनु पर्दछ । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ भने संसदले सरकारका सबै गतिविधिप्रति ध्यान दिई अनुगमन गर्नु पर्दछ ।